Yintoni eyenza uMhlalutyi oMkhulu? | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 5, 2009 NgeCawa, ngo-Epreli 3, 2016 Douglas Karr
E INgqungquthela yokuPhucula ukuThengisa, Sibe nencoko enomdla kwinto eyenza umhlalutyi wedatha omkhulu. Igumbi eligcwele abahlalutyi kwigumbi, ngumbuzo obalaseleyo. Ngokubanzi, iqela endandisebenza nalo lavuma ukuba bekukho abahlalutyi beshishini kunye nabahlalutyi beenkcukacha- kwaye ulindelo kulowo nalowo lwahlukile.
Abahlalutyi beshishini babonelela ngolwazi kwifomathi evumela izigqibo ukuba zenziwe ngeenjongo zeshishini engqondweni. Abahlalutyi beenkcukacha babonelela ngokulula ngedatha. Zombini kufanelekile ukuba zichaze ngokufanelekileyo idatha ngendlela eya kuthi ilungiselelwe abaphulaphuli kunye nabaphulaphuli bakwazi ukufikelela kwizigqibo kunye nokudideka okuncinci.
Kwakukho imvumelwano yokuba amandla eempembelelo zomhlalutyi yinto enkulu. UChris Worland weMicrosoft beka abahlalutyi kwiibhakethi ezi-3 eziqondayo- the othatha iodolo, i nefuthe, kwaye i umgqatswa othembekileyo. Inkcubeko yombutho wakho kunye nolwakhiwo ziya kugqiba ubunzima babahlalutyi bakho.
U-Andrew Janis ubilise kubahlalutyi ukukwazi ukwahlula idatha enomdla ngokuchaseneyo. Bonke bavumile ukuba uphawu lweempawu zabahlalutyi beenkcukacha eziyimpumelelo sisakhono sokusonga umxholo kunye nokujikeleza idatha kunye nokwenza ngokwezifiso kubaphulaphuli, ukuqonda ishishini kunye nomzi mveliso, kwaye ube yinkosi yokubona.
Ngaphandle kwamathandabuzo ukuba nayiphi na inkampani enkulu inokuphumelela okanye isilele ngokusekwe kubuchule kunye nefuthe labahlalutyi babo. Kwiinkampani ezingezikhulu, abasebenzi bakho bahlala benxiba iminqwazi eyahlukeneyo-wonke umntu unomntu ohlalutya idatha kunye nokubonelela ngeziphumo. Ukukhetha abahlalutyi abakhulu (okanye abasebenzi abahlalutya) kubalulekile kwimpumelelo yenkampani yakho okanye ukusilela. Khetha ngobulumko.
Abathengisi: Ibali leMpumelelo
Meyi 7, 2009 kwi-5: 01 PM
Abahlalutyi boShishino nabo kufuneka balunge kuhlalutyo lwentsingiselo kunye nokuchonga. I-3 - i-6 inyanga yentloko-intloko inokwenza okanye iphule imveliso ngokukodwa kwicandelo lobugcisa obufutshane bomjikelo wobomi.
Meyi 8, 2009 kwi-9: 19 PM
Isithuba esihle! Thina bantu bokuyila siyaphumelela kulwazi oluziswa ngabahlalutyi abakhulu etafileni ukwenza izinto zokuthengisa ngokuthe ngqo. Sifuna abahlalutyi abakhulu ngakumbi ukuze banyathele phambili kunye neziko.